I-PCT Izidakamizwa abahlinzeki bezinchungechunge zechungechunge - I-AASraw powder
/ Imikhiqizo / PCT Izidakamizwa
Singabantu abahlinzeki be-PCT Izidakamizwa ze-powder, i-PCT Drugs powder ukudayiswa, Njengoba sithembisile, wonke ama-PCT AmaDrugs powder ahlanzekile angaphansi kwe-98%.
Izidakamizwa ze-PCT powder
Imithi ye-PCT i-powder isho isidakamizwa se-Post cycle therapy. Ukwelashwa kwe-Post cycle kuyindlela yokusebenzisa izidakamizwa ezisebenza ngezindlela ezihlukahlukene zokwenza ngokuzama ukuzinza nokubuyisela ama-hormone womsebenzisi emuva kokujwayelekile uma umjikelezo we-anabolic androgenic steroid ocindezelayo usuphelile.
Uma umsebenzisi eseqedile ukusebenzisa ama-androgenic steroids anabolics asele esimweni lapho ukukhiqizwa kwabo kwe-testosterone yemvelo kuye kwacinywa khona, ngezinye izikhathi kakhulu. Ngaphezu kwalokho, amazinga e-steroids ahlala ehliswayo njalo ohlelweni lwawo, eshiya umsebenzisi emjikelezweni wokuthunyelwe wombuso omkhulu, ongabonakalisa ekutheni bakwazi ukugcina ubunzima be-muscle ngenkathi umjikelezo. Ngalokhu engqondweni, kulula ukuphetha ngokuthi singathanda ukuthola indlela yokubuyisela ukukhiqizwa kwe-testosterone yemvelo ukuletha indawo engcono impilo yonke nokugcina izicubu zomzimba.
I-Clomiphene citrate (i-clomid powder) ne-tamoxifen (i-nolvadex powder) ingaqashwa umjikelezo wokuthutha ukuze usize ukubuyisela ukukhiqizwa kwe-testosterone yemvelo. Ngenxa yokuthi bobabili bayakwazi ukuvimbela i-estrogen ku-hypothalamus ne-pituitary, ngaleyo ndlela sikhiphe ukuvimbela impendulo engalungile, sinemithi engakwazi ukwandisa ngempumelelo i-FSH (i-follicle evuselela i-hormone) ne-LH (i-hormone i-luteinizing) emzimbeni wesilisa. Ukwanda kwe-LH kungasiza ukuvuselela amangqamuzana eLeydig ezivivinyweni ukukhiqiza u-testosterone ngaphezulu.
Abaningi bathola nje ukusebenzisa i-nolvadex powder ngokwanele ngokwanele ukuze bazuze emijikelezweni yabo. Abanye, kodwa, bakhetha ukusebenzisa zonke izidakamizwa ukumboza wonke ama-angles. Kubalulekile ukuphawula ukuthi i-nolvadex poeder inamandla kakhulu ekugqugquzelweni ukwanda kwe-LH, nge-milligram kuya kwombono we-milligram, uma kuqhathaniswa neye-clomid powder. Futhi, abasebenzisi abaningi bakhononda ngemiphumela emibi kusuka ku-clomid powder njengemiphumela yokubukwa kanye nokushintsha kwemizwelo.
Amanani we-nolvadex we-PCT protocol:
Usuku lwe-1 100mg
Kulandela izinsuku ezingu-10 60mg
Kulandela izinsuku ezingu-10 40mg
Lokhu ngenhla kuyisampula yeprotocol engasetshenziswa. Kusobala ukuthi umjikelezo kanye neminye imingcele ingashintsha imilinganiselo nobude bomlayezo wakho womjikelezo wokuthutha.
Njengoba kushiwo ngenhla, abasebenzisi abaningi bathanda ukusebenzisa kokubili umjikelezo we-nolvadex ne-clomid powder ukumboza wonke ama-angles.
Izilinganiso ze-nolvadex powder ne-clomid powder ehlangene ne-PCT protocol:
Usuku lwe-1 i-Clomid powder 250mg + I-Nolvadex powder 60mg
Ukulandela izinsuku ezingu-10 i-powder i-Clomid 100mg + i-Nolvadex powder 40mg
Ukulandela izinsuku ezingu-10 i-powder i-Clomid 50mg + i-Nolvadex powder 20mg
Le ndlela kufanele iphumelele. Lokho kusho, njengokwenza i-nolvadex powder kuphela protocol, akusethiwe etsheni. Imijikelezo engaphezu kokucindezela ingadinga ukulinganisa okuphezulu noma isikhathi eside sokusebenzisa ukuletha imiphumela efunayo.
Uma uqala iphrothokholo ye-PCT izoxhomeka kuma-compounds alawulwa kulo mjikelezo. Bheka up wonke ama-steroid owawusebenzisa phakathi nomjikelezo wakho etafuleni lethu elingezansi, futhi uqaphele umuthi onosuku olude kakhulu lokuqala ngemuva kokungeniswa kokugcina. Lokhu kungukuthi asiqali iphrothotholi ye-PCT uma kungenzeka namanje kunamazinga aphakeme a-androgens ohlelweni, okwenza i-PCT ibe yincithakalo kuze kufike amazinga.
Okwenza umzimba usebenzise i-Clomid powder
I-Clomid powder yigama elijwayelekile le-Clomiphene Citrate futhi liyisanti yokwenziwa. Kunqunywe ngomuthi ukusiza ukuvuthwa kwezifo ezincane zokuzala. Elinye igama lesi-generic ngu-Serophene.
Iningi lama-anabolic steroids, ikakhulukazi i-androgens, ibangela ukuvimbela ukukhiqizwa komzimba we-testosterone. Lapho umakhi womzimba ephuma umjikelezo we-steroid, ukukhiqizwa kwe-testosterone yemvelo kungukuthi futhi amazinga we-steroids ethathwe egazini ayancipha. Lokhu kushiya ukulingana kwezinto eziphilayo: ama-hormone anabolic ephezulu egazini, ngakho-ke umzimba unesimo se-catabolism, futhi ngenxa yalokho, izicubu eziningi ze-muscle ezitholakale kulo mjikelezo manje zizolahleka.
I-AASraw inikeza izinhlobo ze-powder eluhlaza we-PCT yezidakamizwa powder, i-Tamoxifen Citrate / Nolvadex, i-Clomiphene citrate / i-Clomid powder, i-Exemestane / Aromasin, i- Fluoxymesterone / Halotestin, i-Anastrozole / i-Arimidex ne-Letrozole / i-Femara. Uyakwamukela ukuthatha lezo zinto ezisetshenziswayo kusuka ku-AASraw ukuze uvikele impilo yakho.
I-Clomiphene Citrat (Clomid) powder
I-Tamoxifen Citrate (Nolvadex) powder
I-Letrozole (Femara) powder
I-Fluoxymesterone (Halotestin) powder
I-Hydralazine HCL powder
I-Pyridoxal hydrochloride powder